Sideed Askari American Ah Oo Lagu Dilay Dalka Afghanistan. – Calamada.com
Sideed Askari American Ah Oo Lagu Dilay Dalka Afghanistan.
calamada April 9, 2018 1 min read
Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa soo saartay Tirakoobka weeraradii dhacay Bishii lasoo dhaafay iyo tirada askarta ah ee ciidamada Saliibiyiinta Mareykanka iyo kuwa maamulka daba dhilifka ah Kaabul looga dilay weeraradaasi.
Warka Imaarada Islaamiga ayaa lagu xaqiijiyay in ciidamada Mujaahidiinta Bishii lasoo dhaafay ee Marso ay fuliyeen (765) Todabo Boqol Lixdan Iyo Shan Weerar,Afar ka mid ah weeraradaasi waa Camaliyaat Istish-haadiyo ah.
Dhanka ciidamada Mareykanka waxaa weeraradaasi looga dilay Sideed askari waxaana looga dhaawacay Sideed askari taasi oo isugu geynta ka dhigeysa in bishii lasoo dhaafay ciidamada Saliibiyiinta Mareykanka gudaha dalka Afghanistan Baqti iyo dhaawac kaga noqdeen Sideed iyo Toban askari oo American ah.
Dhanka maamulka daba dhilifka Kaabul waxaa weeraradaasi looga dilay (1576)Kun Shan Boqol Todobaatan Iyo Lix isugu jirta saraakiil iyo askar,sidoo kale waxaa weeraradaasi maamulka Ridada Afghanistan looga dhaawacay (1024)Kun Labaatan iyo Afar askari oo ka tirsan maleeshiyaatka daba dhilifka Kaabul.
Dhanka Gaadiidka waxaa ciidamada Mareykanka iyo kuwa maamulka daba dhilifka Ashraf Gani looga gubay weeraradii bishii lasoo dhaafay ciidamada Mujaahidiinta Dhaalibaan ay ka fuliyeen gudaha dalka Afghanistan looga gubay (230) Labo Boqol iyo Soddon Gaari kuwaasi oo ka kooban noocyada kala duwan ee gaadiidka dagaalka.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 23-07-1439 Hijri.
Next: Weeraro Ka Kala Dhacay Degmooyinka Howlwadaag Iyo Yaaqshiid Ee Muqdisho.